Messi oo bixin doona ganaax badalkii uu xabsi geli lahaa - BBC News Somali
Messi oo bixin doona ganaax badalkii uu xabsi geli lahaa
Image caption Lionel Messi waxaa lagu helay dambi ah inuu canshuur la baxsday 2016
Xiddiga kubadda cagta ee Lionel Messi ayaa ka baaqsan kara inuu xabsi galo muddo 21 bilood ah, ka dib markii lagu helay inuu cashuur la goostay, xabsigana loogu badeli karo ganaax lacageed, sida ay ku warramayso warbaahinta Spain.
Dacwad oogaha Spain ayaa la sheegay inuu ka doonayo Messi lacag dhan 255,000 oo euro si uu xabsiga uga badbaado.
Go'aanka kama dambeysta ah ee ganaaxa ayaa waxaa leh maxkamadaha dalkaasi.
Messi iyo aabihii Jorge ayaa lagu helay dembi ah in ay dalka Spain kala baxsadeen cashuur dhan 4.1 milyan oo euro mudadii u dhexeysay 2007 iyo 2009.
Maxkamad ku taalla magaalada Barcelona ayaa ogaatay in labadaasi nin ay dhaqaalahooda u wareejiyeen dalalka Belize iyo Uruguay oo aan cashuur ka qaadin.
Racfaan uu Messi ka qaatay xukunka ayay maxkamadda ugu saraysa Spain diiday bishii hore, balse waxaa la dhimay xukunka aabihii, ka dib markii uu bixiyay qaar ka mid ah cashuurtii loo haystay.
Guulihii ugu weynaa ee Messi
Goolasha uu u dhaliyay Barcelona waxay gaareen 500 bishii April 2017
Abaalmarinta FIFA ee Ciyaaryahanka kubadda cagta ugu wanaagsan dunida ayuu ku guuleystay shan jeer
Waxaa seddax jeer loogu codeeyay inuu yahay ciyaaryahanka ugu wanaagsan ee Yurub.
Wuxuu haystaa rikoorka gool dhalinta ugu badan ee La Ligaha Spain
2008 wuxuu dalkiisa Argentina u soo hooyay billada dahabka ee Olimbikada
55 gool ayuu dhaliyay taas oo ka dhigtay ciyaaryahankii ugu gool dhalinta badnaa ee dalka Argentina
Messi ma ahan xiddigii ugu horreeyay ee kubadda cagta ee oo lagu soo ooga dacwado la xiriira canshuur la dhuumasho.
Cristiano Ronaldo ayaa laga yaabaa in dacwaddan oo kale uu wajaha. Weeraryahankan 32 sano jirka ah ee u ciyaaro Real Madrid ayaa looga shakiyay inuu si sharci darro ah ku helay lacag dhan 13 milyan oo gini.
Qareenada José Mourinho ayaa beeniyay in maamulaha kooxda Manchester United uusan bixnin canshuur dhan $3.6 milyan markii uu macallin u ahaa kooxda Real Madrid intii u dhexeysay sanadihii 2011 ilaa iyo 2012.